पूर्वसरकारका निर्णय बदर गर्दै ओली सरकार – indepth.com.np
पूर्वसरकारका निर्णय बदर गर्दै ओली सरकार
नेकबारे सर्वोच्च, विशेष, अख्तियार चारैतिर मुद्दैमुद्दा : त्यसमाथि थपियो चाँगुनारायण नपा
मुद्दा नछिनिँदै विवादित जग्गामा भवन बनाउँदै चाँगुनारायण नपा
'ओलीले सत्ता कब्जा गरेर आफ्नै गुटका मान्छेको मात्रै स्वार्थ पूरा गरे'
देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पीडितको आन्दोलन जारी
देको–मिबा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनामा नेमकिपा र भक्तपुर नपाको छायाँ !
व्यक्ति होइन, व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ : गजुरेल
मौखिक निर्णय गर्दै सकियो मध्यपुर थिमिको कार्यपालिका बैठक
पन्थी पनि रिजालको बाटोमा ! : मेयरले बोलाउन लगाए कार्यपालिका बैठक
हनुमन्ते कोरिडोर निर्माण र पुरानो बाटो विस्तार तत्काल रोक्न माग
प्रदेश प्रमुखको पद पनि धरापमा : सशस्त्रका पाँच एआईजीको राजीनामा
काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएराति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गतेयता विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यसैबीच संसदमा पेस भएको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने र परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
यसैगरी नेपाल–चीन व्यापार पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी वार्तामा भाग लिन नौ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सो टोलीलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारीसमेत दिइएको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको पद पनि धरापमा
सरकारले भदौपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा परेको छ ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ ३ गते एकलौटी ढंगले सातै प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
नियुक्त गरिएका प्रदेश २ का कायस्थ र प्रदेश ५ का झाबाहेक बाँकी सबै कांग्रेस निकट हुन् । कायस्थ र झा कांग्रेससँगको तत्कालीन पावर सेयरिङका कारण मधेस केन्द्रित दलहरुको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख हुन सफल भएका थिए ।
प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओली सरकारले नियुक्ति बदरको सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुपर्नेछ ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) ले राजीनामा दिएका छन् ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका निर्णय खारेजीको निर्णय गरेलगत्तै सशस्त्रका पाँच एआईजीले राजीनामा दिएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७४ माघ १५ गते सशस्त्रका तत्कालीन डीआईजी जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै पाँच एआईजीले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।
निषेधाज्ञाविरुद्धको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
कांग्रेस सरकारविरुद्ध कडा प्रस्तुत हुँदै
‘ओलीले सत्ता कब्जा गरेर आफ्नै गुटका मान्छेको मात्रै स्वार्थ पूरा गरे’